गर्मीयाममा उखुको रस पिउनुको ७ फाइदा | Healthplus Nepal
2019 Oct Sat 03:48:44
Aug Mon 2019 07:23:46
गर्मीमा उखुको रस सेवन जिब्रोको स्वाद बढाउने मात्रै होइन यसले सम्भावित विभिन्न रोगबाट पनि टाढै राख्छ । उखुको रस सेवन गर्नाले एनीमिया, जण्डिस लगायत रोगबाट टाढै राख्छ । उखुमा प्रशस्त मात्रामा मिनरल, भिटामिन र एन्टीअक्सिडेन्ट पाइन्छ । जसको सेवनले परिर्वतित मौसममा हुने विभिन्न रोगबाट मुक्ति मिल्छ । साथै जो व्यक्ति तौल घटाउने सोचमा छ उसका लागि पनि उखुको रस निकै फलदायी हुन्छ । किनकी उखुको रसमा चिल्लोपन सून्य हुन्छ । साथै यसमा भएको गुलियो पनि प्राकृतिक भएकाले यसले मधुमेहका बिरामीका लागि पनि कुनै हानी गर्दैन । उखुको रस खानुका फाइदाहरू निम्न छन् :—
१. अनुहारको चायाँ हटाउछ
नियमित रुपमा उखुको रस सेवन गर्नाले अनुहारमा भएका चायाँलाई हटाउन मद्दत गर्छ । साथै उखुको रसमा मुल्तानी माटो मिसाएर पेस्ट बनाएर अनुहारमा लगाउँदा पनि निकै फाइदा मिल्छ । यसरी बनाएको मास्कलाई करिब २० मिनेटसम्म अनुहारमा राख्नुपर्छ । यसपछि चिसो तौलियाले पुछ्नुपर्छ ।
२. शक्ति प्रदायक
उखुको रस सेवनले शरीरमा तुरुन्त शक्ति ल्याउन मद्दत गर्छ । यती मात्रै होइन । उखुको रस खानाले शरीरलाई फूर्तिलो पनि बनाउँछ ।
३. मुधमेहका बिरामीले पनि सेवन गर्न सक्छन
मधुमेहका बिरामीले पनि उखुको रस सेवन गर्न सक्छन । उखुको रसले रगतमा चिनीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । उखुको रसमा हानीकारक गुलियोपन हुँदैन ।
४. क्यान्सरबाट जोगाउँछ
विशेषगरी प्रोस्टेट, पेट, फोक्सो र स्तन क्यान्सरका जीवाणुलाई निस्तेज गर्ने गुण उखुको रसमा हुन्छ ।
५. वान्ता रोक्छ यदि गर्मीका कारण बारम्बार वान्ता हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा एक गिलास उखुको रस सेवन गरे फाइदा पुग्छ । एक गिलास उखुको रसमा २ चम्चा मह मिलाए अझै राम्रो हुन्छ ।
६. पिसाब पोलेको ठीक गर्छ
पिसाब फेर्दा पोल्छ भने त्यस्तो अवस्थमा उखुको रस सेवन गरे निकै राहत मिल्छ । साथै उखुको रसले पिसाब सम्बन्धी अन्य समस्या पनि ठीक पार्छ ।
७. तौल नियन्त्रणमा राख्छ
उखु गुलियो हुनुको बाबजुद पनि यसमा चिल्लो पदार्थ सून्य हुन्छ । यसले मानव शरीरको खराब कोलेस्ट्रोलको कम गर्नुको साथै तौल बढाउने कारणलाई पनि कम गर्छ । उखुको रसमा घुलनशील फाइबर हुने भएकाले तौल घटाउन निकै सहयोग गर्छ ।
किन दुख्छ गर्मीमा टाउको ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय...
के कारणले हुन्छ बच्चाहरुमा यस्तो घाउ खटिरा ? जोगाउने कसरी ?